अमर कुकरेजाको लेखहरूमा Martech Zone |
द्वारा लेखहरू अमर कुकरेजा
अमर कुकरेजासँग सेल्सफोर्स टेस्टि yearsमा वर्षौंको अनुभव छ। उसले एपेक्सको साथसाथै अन्य परीक्षण पनि प्रयोग गर्दछ। उनले अन्य सम्बन्धित सेल्सफोर्स सेवाहरू पनि प्रस्ताव गर्दछ, प्रारम्भिक बिक्री बल सेटअप र व्यवस्थापन सहित। यस बारे थप जान्नको लागि बिक्री बल Github.
बिहीवार, जनवरी 19, 2017 शुक्रबार, जनवरी 20, 2017 अमर कुकरेजा
सेल्सफोर्स परीक्षणले तपाईंलाई तपाईंको अनुकूलित बिक्री बल समायोजन र अन्य उद्यम अनुप्रयोगहरूका साथ प्रकार्यहरू मान्य गर्न मद्दत गर्दछ। राम्रो परीक्षणले खाताबाट लिड्स, अवसरहरू देखि रिपोर्टहरू, र अभियानहरूबाट सम्पर्कहरूसम्म सबै सेल्सफोर्स मोड्यूलहरू समेट्छ। सबै परीक्षणहरूको मामला मा जस्तै, त्यहाँ एक राम्रो (प्रभावकारी र कुशल) तरीका एक बिक्री बल परीक्षण गर्ने एक खराब तरीका छ। त्यसोभए, सेल्सफोर्सको राम्रो अभ्यास के हो? सहि परीक्षण उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस् - बिक्री बल परीक्षण